Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO
Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO
Wararka naga soogaadhaya wadanka Ogadenia gaar ahaan xarunta dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo dhowr ah oo lagu naafeeyay ciidanka gumaysiga Itoobiya ka jooga dalka Ogadenia. Dagaaladan oo dhacay afar maalmood oo kala duwan ayaa cadawga lagaga dilay inta la hubsaday ciidan gaadhaya 24 iyo dhaawac badan. Dagaaladaa ayaa udhacay sidan.
15/11/13 Kuuscowl oo dagmada Fiiq ee xarunta gobolka Nogob katirsan dagaal culus oo kudhaxmaray CWXO iyo ciidanka saama laluudka ah ee gumaysiga Itoobaya waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 10 askari 19 kalana waa lagaga dhaawacay.
28/11/13 Oodwayne oo dagmada Garbo katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 2 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
4/12/13 Labatoglaha oo Fiiq katirsan dagaal xoogan oo kudhaxmaray ciidanka xaq udirirka Ogadenia iyo kuwa gumaysiga Itoobiya waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 12 askari 15 kalana waa lagaga dhaawacay. Waxaa sidoo kale lagaga furtay hub iyo saanad milatari oo kale.
12/12/13 Calooldheer oo Birqod udhaw kamiin ay ka xidheen CWXO waxaa soo galay ciidamo uu cadawgu leeyahay waxaana goobtaas lagu gaadhsiiyay khasaare balaadhan oo aan faahfaahintiisa lahaynin.